Izindaba - isingeniso nokusetshenziswa komtholampilo kweLaryngeal Mask Airway
I-Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. yasungulwa ngo-Agasti 2005. Itholakala eHaiyan County, eJiaxing, eChina okuyisikhungo se-Yangtze River Delta esithuthukile futhi siseduze neShanghai, i-Hangzhou ne-Ningbo, kanye ne-Zhapugang -Jiaxing-Suzhou Expressway, Hangzhou-Ningbo Expressway kanye neJiaxing South Station. Isimo sayo ngokwendawo siphakeme, futhi ezokuthutha zilula futhi ziyashesha.
Ihlanganisa indawo ecishe ibe yizi-20,000㎡gumbi eli-100.000 lekamelo elihlanzekile elingu-10000,000 kanye nelebhu engu-300㎡. Isikali sebhizinisi sizinzile ezimbonini eziyishumi eziphezulu eMpumalanga China. Futhi umthamo wokukhiqiza nokuthengisa kube ngabathathu abaphezulu eChina iminyaka emihlanu elandelanayo Imikhiqizo isidlulile i-ISO13485: 2016, i-European CE ne-FDA certification.
Ukwethulwa kweLaryngeal Mask Airway
Ububanzi besicelo: Indlela yokuhamba imaski yelaryngeal ilungele ukuphefumula komoya okwenziwayo kweziguli ezidinga i-anesthesia ejwayelekile kanye nokuvuselelwa okuphuthumayo, noma ukusungula imigwaqo yomoya yokufakelwa yesikhashana yesikhashana yezinye iziguli ezidinga ukuphefumula. Ukusebenza: Uma kuqhathaniswa nesisombululo sokulawula esingenalutho, umehluko we-pH ngu -1.5; umkhiqizo uyinyumba, wenzalo yi-ethylene oxide, futhi i-residual ethylene oxide ayikho ngaphezu kuka-10μg / g.
1. I-Tube eyodwa ye-Laryngeal Mask Airway yokusetshenziswa okukodwa
I-100% yezinga lezokwelapha le-silicone lokuhambisana okungaphezulu.
Idizayini ye-non-epiglottis-bar inikeza ukufinyelela okulula nokucacile nge-lumen.
Imigqa emi-5 ye-angular ivela lapho ikhafu isesimweni esicabalele, esingagwema i-cuff ukudelela ngesikhathi sokufakwa.
Isitsha esijulile sekhafula sihlinzeka ngophawu oluhle kakhulu futhi luvimbele ukuvinjelwa okubangelwa yi-epiglottis ptosis.
Ukwelashwa okukhethekile kwendawo yamakhokho kunciphisa ukuvuza futhi kugudluke ngempumelelo.
Ngaphandle kokusebenzisa i-laryngoscopy glottis, nciphisa izehlakalo zomphimbo obuhlungu, i-glottis edema nezinye izinkinga.
Ingafakwa kalula, idinga kuphela imizuzwana eyi-10 ukuxazulula inkinga yokuphefumula.
2. I-Single-Tube eqinisekisiwe ye-Laryngeal Mask Airway
Imigqa emi-5 ye-angular ivela lapho ikhafu isesimweni esicabalele, esingagwema ikhekhe likhubazeke ngesikhathi sokufakwa.
Ukuqiniswa komoya kunciphisa ukuchoboza noma ukinking.
Ukugoba okungu-360 °, ukusebenza okuqinile kokulwa nokugoba, okulungele ukungena komoya ngesikhathi sokuhlinzwa ezindaweni ezahlukahlukene zeziguli.
Induku yomhlahlandlela ene-arc ebunjiwe ikhethwa ukwenza lula ukufakwa kwe-LMA ngokuya ngesakhiwo nokwakheka komzimba womlomo nomphimbo womuntu.
3. I-single-Tube Laryngeal Mask Airway ene-Epiglottis Bar
Kwenziwe ngo-100% ongenisiwe we-medical-grade silicone.
Olayini abayisihlanu bama-angular bavela lapho ikhafu isesimweni esicabalele, esingagwema ikhafu ukuthi ikhubazeke ngesikhathi sokufakwa.Ukwakhiwa kwamabili -epiglottis-bar esitsheni, kungavimbela ukuvinjelwa okubangelwa yi-epiglottis ptosis.
Ukwelashwa okukhethekile kobuso bekhafu kunciphisa ukuvuza futhi kugudluke ngempumelelo.
4. I-single-Tube Laryngeal Mask Airway ene-Epiglottis Bar
5. I-Double-tube eqinisekisiwe ye-Laryngeal Mask Airway
Kunamapayipi amabili ahlukene okuphefumula nawokuhambisa amanzi, afanayo futhi axhumene nomgudu womoya womuntu kanye nomphimbo, okwehlisa kakhulu ukuvela kwe-reflux nokulangazelela, futhi ngasikhathi sinye kusiza ukubekwa nokubeka imaski yomlomo wamalaka.
Ishubhu elizimele lokuhambisa amanzi esiswini lingadonsa ngesandla nangokubi okuqukethwe kwesisu ukugwema ingozi ye-reflux.
Ikhefu elifuthwayo elithuthukisiwe nelikhulisiwe, liqinisa ukubekwa komphimbo, lingenza umoya omncane wokucindezela isikhathi eside, futhi landise ububanzi bokusebenzisa i-LMA.
Iphedi lekhava elihlanganisiwe lingasetshenziswa njengephedi yamazinyo, kulula ukuyilungisa, lidinga ithephu kuphela ukuxazulula inkinga yokulungisa.
4. Ikhanda lesiguli lalibuyile kancane, nesithupha sesobunxele emlonyeni wesiguli kanye nokudonsa umhlathi wesiguli, ukuze sandise igebe eliphakathi kwemilomo.
5. Usebenzisa isandla sokudla ukubamba ipeni eliphethe imaski yomlomo, ukwenza ukuthi kutholakale, umunwe wenkomba nomunwe ophakathi nomzimba wokuxhumeka kwekhava kanye ne-ventilation tube laryngeal mask, umboze umlomo ubheke ohlangothini oluphakathi komhlathi ophansi, ulimi olunamathela phansi kwe-LMA pharyngeal, kuze kungasasuki kuze kube manje. Futhi ungasebenzisa ukuhlehlisa indlela yokufaka imaski yomphimbo, vele umboze umlomo ubheke ulwanga, uzobekwa emlonyeni kuya emphinjeni ezansi kwesifihlavu somlomo, kanye no-180 ° ngemuva kokujikeleza, bese uqhubeka nokucindezela phansi i-laryngeal imaski, kuze kube yilapho ingeke iphushe kuze kube manje. Lapho usebenzisa imaski yelaryngeal ethuthukisiwe noma ye-ProSeal ngenduku yomhlahlandlela. Induku yomhlahlandlela ingafakwa emgodini womoya ukuze ifinyelele endaweni ebekiwe, futhi ukufakwa kwesifihla-mlilo kungakhishwa ngemuva kokufakwa kwemaski yomlomo.
7. Ngokwenkokhelo encane yokumboza isikhwama esigcwele igesi (inani lomoya alikwazi ukudlula uphawu lokugcwalisa oluphezulu), xhuma isekethe lokuphefumula bese uhlola ukuthi umoya ongena kahle, njengomoya noma ukuvinjelwa, kufanele ngokwezinyathelo zokufakwa kabusha imaski yomlomo omuncu.
2. Iziguli ezine-edema laryngeal, ukuvuvukala okukhulu kwendlela yokuphefumula, kanye nethumba lepharynx.
3. Isifo somqala sibanga ukuvinjelwa komoya, ukunciphisa ukuthotshelwa kwamaphaphu, noma ukumelana nokuphakama komoya, abantu abadinga umoya omncane wokucindezela.
4. Iziguli ezinemigwaqo emincane ecindezelwe futhi yathanjiswa futhi iba nokuvinjelwa komoya ngemva kokubulawa izinzwa.
5. Labo abaphikisana nezinto zomkhiqizo.
6. Iziguli ezibhekwa odokotela njengezingalungile kulo mkhiqizo.
Umkhuba womtholampilo wesigubhu se-laryngeal esinezihubhu ezimbili:
Izinto zokuhamba kufanele zihlanzeke futhi zihlanzeke, nomthombo womlilo kufanele ubekwe wedwa. Imikhiqizo kufanele igcinwe kumswakama ohambisanayo ongekho ngaphezu kwama-80%, izinga lokushisa alikho ngaphezu kwama-40 degrees Celsius, awekho amagesi abhubhisayo negumbi elihle lokuhlanza umoya. Gwema ilanga eliqondile, futhi akuvunyelwe nakancane ukuligcina ndawonye nezinto ezinobuthi nezinobungozi.